Celebrating King's Day In The Netherlands (King ayaa) | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Dabaal Maalinta King ee Nederland The (King ayaa)
Dabaal Maalinta King ee Netherlands iyo sidoo kale waxaa laga yaabaa in xisbiga ee Holland ugu fiican. on 27 April, waxay u dabaal dhalashadiisa King Willem-Alexander ayaa la music, dhinacyada waddooyinka, suuqyada tagfi, iyo alaabtaada, madadaalo. boqorkiina wuxuu ku dhex marta dalka oo uu qoyska. Habeenkii Maalinta King ayaa ka hor, Habeenkii King ayaa lagu xusaa bandhigyo muusig Hague iyo magaalooyin kale iyo boodada ugu weyn qaranka ('Lacag la'aan ah') suuqa ee Utrecht. Ready si aad u ogaato waxa ay ku saabsan oo dhan? halkan waa sababta aad waa in Dabaal Maalinta King ee Holland.
*Note! Maalinta King waa bil ka mid kaliya. Hadda waa waqtiga si ay u ballansan aad hotel Amsterdam for dabaal Maalinta King ee Holland. Visitors oo dhan ka Holland, oo sii kordheysa buugga dibadda hore si loo hubiyo in qolalka waxaa laga heli karaa.
Maxaa ku jira magaca A?
Originally, Maalinta Princess loo dabaal ee Holland dhalashadii Wilhelmina ee (31 August), markay weli amiirad ku ahayd. Xisbiga lahaa qaybo badan in ay, lugu daro; kulan carruur badan iyo jidadka lagu qurxiyey. Marka Wilhelmina noqday Boqorad cusub ka dib markii dhimasho aabbeheed, waxaa la bedelay si ay u Maalinta Queen.
Juliana, Boqorad soo socda iyo gabadhiisa Wilhelmina ee, damaashaaday Day Queen ayaa 30 April la dhoolatus ku saabsan Soestdijk. Beatrix sidoo kale u dabaal Maalinta Queen ayaa 30 April (iyada u gaar ah dhalasho waa Janaayo) laakiin lid ku ah hooyadeed, ayay kaxaysay qoyska iyada oo dhan iyo safray dalka ku baahsan si ay u booqdaan dhowr degmo. King Willem Alexander ayaa raacay dhaqankan. Waxa uu ku dhashay on 27 April oo waxay noqotay Maalinta rasmiga ah ee 2014 waayo dabaal Maalinta King ee Holland.
Orange WAX ​​KASTA on dabaal Maalinta King ee Holland!
Qoyska boqortooyada Dutch waxbay ushafeeci idanka magaca: Golaha Orange. Tani waxa ay macne ka dhigan tahay midabka orange. Sidaas darteed, waxa ay noqotay midabka qaranka Holland ee. Maalinta King ee, waxaad ka heli doontaa qof walba orange xiran hab qaar ka mid ah ama qaab. Sidaas, heli shopping!
Iyadoo dabaal Maalinta King ee Holland, dadka waxaa loo ogol yahay jidka inay iska iibiso wax aan u baahan ogolaansho. Free Suuqyada xaydha waxaa lagu qabtaa jardiinooyinka iyo jidadka, iyadoo dad badan oo bixiya hantidoodii la rabin, music, ama madadaalo kale oo iib ah. Ka fikir waxa ka mid ah sida sale garaash, laakiin miisaan aad u balaaran! in Utrecht, suuqyada tagfi xitaa bilaabi habeen ka hor maalinta King ee. Sidaas heli kabo socod oo aad ku.
AAN rooti in dabaal Maalinta King ee Holland!
kasta iidda wuxuu u baahan yahay rooti ah! Right? Maalinta King ee, dadka ka dhigi rooti ah boqorka ula Orange qadhaadh, a liqueur orange dhalaalaya. Dabcan, xajiya la xeerkii orange xiran, sidoo kale! Cabitaanada waxaa la abuuray 1620 si ay u dabaal degtay guusheeda Prince Fredrick Henry ayaa. Markii hore, waxaa la aan si fiican u yaqaan, laakiin ka dib markii William ee Orange noqday boqorka kowaad, waxaa la soo saaray mar kale. Tan iyo markaas, Orange qadhaadh ayaa si dhow u la xidhiidha qoyska boqortooyada Dutch.
Waxa aan la cabbo? Bi'ir, DABCAN!
Holland jecel yahay ay mashquulo iyo ka dib labaatan sano oo suuq-smart by Heineken, Kibirkoodii ganacsi Dutch, qof walba waxa uu khali on foamy nectar macaan ee ah ilaahyada inta lagu guda jiro Maalinta King ee.
No muraayad biir waxaa looga tegey buuxa, maanka ma waxaa looga tegey cad. Haddii ay jirto abid waa maalin ay si dhab ah hoos ha timahaaga, this waxa uu noqon lahaa! Iyo ma ahan oo keliya Day King ee, Habeenka King ayaa ka hor waa madadaalo badhkiis. Waa caadi ahaan ku mashquulsan sidii Day King ayaa laga jaray ee caruurta iyo qoysaska. In Iscelin hab xitaa ka yar si ay u daadan aad biir, oo erayadaadiina waad ku dheehan tahay.
Brussels si Tareenadu Maastricht
Antwerp in Tareenadu Maastricht
Liege in Tareenadu Maastricht
Charleroi in Tareenadu Maastricht
Dabaal Maalinta King ee Netherlands ma aha oo kaliya ka-ups koray. Waxaa jira waxyaabo badan oo ka dhacaya magaalada oo dhan, waayo, dhallinyarada iyo dhallinyarada ee wadnaha oo ay ku jiraan fool-rinjiyeynta, ciyaaraha, iyo ciyaaraha dhacdooyinka. Hubi Boqorka Maalinta xiiso qoyska page wixii macluumaad dheeraad ah.
Berlin si The Hague Tareenadu
Paris si The Hague Tareenadu
Night King ee & Maalinta Xisbiyada
Dabaal Maalinta King ee Netherlands waa maalin fasax ah, laakiin ma maalin nasasho. Holland, duug hore, dalxiisayaashuna si isku mid ah ayey ugu qulqulaan Amsterdam maalin dabaaldeg ah. madadaalo The dhaqan bilaabaa maalin ka hor maalinta ugu weyn (Night King ee) la jawi damaashaad ku sii magaalada oo dhan Maalinta King ee. DJ ciyaari dhinacyada on bannaanka, doomo dhalaalaya oo la qurxiyey kanaallada ayaa buuxiya, iyo muusikada tooska ah ee qubanaya wadooyinka dayrarka cafe. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka Day King ee.
Dabaal Maalinta King ee Netherlands ee kanaalada ah
Marna ayaa gaadiidka cakirnaan jirtay xiiso aad u badan! Maalinta King ee, kumanaan ka mid ah doonyaha dhalaalaysa qurxiyey santuuq ee kannaallada Amsterdam cidhiidhi ah. Talo Hot. Ballansan doon ka hor!
Ka qaybqaado Maalinta sanadlaha King ee Amsterdam on cajiib ah 1.5-ka saac safar kanaalka dhex bartamaha magaalada. Yaabin ee doonyaha oo dhalaalaysa qurxiyey oo wuxuu ku raaxaysan sharaabka saarnaa aan xad lahayn.
– Duration 90 daqiiqo
– Skip khadka
– Waxaa lagu daabacay ama foojar mobile aqbalay
– xaqiijinta Instant
– baajinta Easy
Holland, duug hore, iyo dalxiisayaashu si isku mid ah ayey ugu qulqulayaan Amsterdam si ay ugu Dabaaldegaan Maalinta King’s Day ee Nederland. Hubi in aadan ka maqnaan doona on madadaalo ah, oo hadda ku ballansan isticmaalaya Save A tareenka la No ajuurada maqan iyo fududahay sida 1, 2, 3!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrating-kings-day-netherlands%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#KingsDay #King ayaa #traveleurope europetravel tareen safarka travelamsterdam travelnetherlands traveltips